Iirosari ezicamngciweyo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ngaba uyayazi loo nto irosari yindlela yokucinga? Njengendlela, kufuneka isetyenziswe ngokunxulumene nesiphelo kwaye ayinakuba sisiphelo ngokwaso. Ewe, isekwe ekuthandazeni iirosari ukuze abathembekileyo baziswe ngendlela yendalo ngomthandazo ocamngcayo. Oku kufuna ukuba ukuphindaphinda kwemithandazo kwenziwe ngokuthe chu kunye nekhadi lendalo, ngaphandle kokubaleka okanye ukugqitha, kwisingqi sokuphefumla. Namhlanje siza kufunda ukuthandaza irosari ecamngca.
I-rosari ecamngca yenziwe kunye nezicelo zethu engqondweni.
1 Imbali yeRosari ecamngca
1.1 Iimfihlakalo zeRosari ecamngca
1.2 Iimfihlelo ezivuyayo
1.3 Iimfihlakalo ezibuhlungu
1.4 Iimfihlakalo ezizukileyo
Imbali yeRosari ecamngca
El Ukucinga ngeRosari, iphuma kwimpefumlelo yakhe ngendlela oku kwathandazwa ngayo kumaXesha Aphakathi, yiNtshona phakathi konyaka ka-1425 ukuya kowe-1525. enye ye "Dumisa uMariya." Ke ngoko, iRosari yokuCamngca ngeBhayibhile ihlala injalo xa kufikwa kumba wokuyithandaza.
Le rosari ivela kwigama layo kwinto yokuba phantse zonke iingcinga zivela kwizibhalo ezingcwele. Olona phawu lubalulekileyo kukuba, kuyo, ukucamngca kulungiselelwe ngohlobo lokuba ngentsimbi nganye yerosari umxholo wemfihlakalo ekuthethwa ngayo utyhile inyathelo ngenyathelo. Esi sizathu sokugcina ubukho bemfihlakalo nganye, ngendlela elula, ngelixa wahlulahlula ishumi kwabo Bathandekayo bakaMariya.
Iimfihlakalo zeRosari ecamngca
Ukuba kuthathelwa ingqalelo ukuba iimfihlakalo ezizukileyo zicetyiswa ngokuqhubekekayo ngeMigqibelo nangeeCawa, sinayo loo nto, ngeMigqibelo ngokwesiqhelo yaziwa njengeentsuku zikaMarian, kungoko kuyacetyiswa ukuba sihambe sicamngca ngenani lesibini leeveki kwiimfihlakalo zovuyo kude kube namhla, apho Ubukho beNtombikazi kaMariya buyabonakala. Bashiya uLwesine bekhululekile ukuze bacamngce ngeemfihlelo zokukhanya.
Siqala imfihlelo yokuqala ngoMvulo nangoMgqibelo, senza uphawu lomnqamlezo kwaye sithandaze:
Owu Thixo, okuphela koNyana okuphela kwamzeleyo, nobomi bakhe, ukufa nokuvuka kwakhe, wasifanelekela umvuzo wobomi obungunaphakade; Siyakubongoza ukuba usinike ukuba, xa sicamngca ngezi mfihlakalo zikwiRosari, sixelisa imizekelo eziqulethwe kwaye siphumelele amabhaso abathembisayo. NgoYesu Krestu iNkosi yethu. R. Amen.
Kwimfihlelo yokuqala, singqina ingelosi ibhengeza kuMariya ukuba uyakuba ngumama woMsindisi. Sino mzuzwana wokuthula, sithandaza uMthandazo weNkosi, Dumisa uMariya nozuko.«Musa ukoyika, Mariya, kuba ufumene ubabalo phambi koThixo. Uya kuzala unyana ke, umbize ngegama elinguYesu ».
Kwimfihlakalo yesibini, singqina utyelelo lukaMariya kumzala wakhe uElizabethe. Siphinda umzuzu wokuthula kunye nemithandazo. Kamsinya nje akuva uElizabhete umbuliso kaMariya, wathi: «Usikelelwe wena phakathi kwabafazi, sinentsikelelo nesiqhamo sesizalo sakho! Ndingubani na ukuba ndingade ndihanjelwe ngumama weNkosi yam? ».
Kwimfihlakalo yesithathu, singqina uMariya ezala uMsindisi wehlabathi. Siphinda ukuthula kunye nemithandazo. Ngoxa uMariya wayeseBhetelehem, ixesha lokuzala kwakhe lafika waza wazala unyana wakhe wamazibulo, wamsongela eziqhiyeni waza wambeka emkhumbini, ngenxa yokuba babengenandawo endlwini yabahambi.
Kwimfihlakalo yesine, singqina uMariya ehambisa uYesu etempileni. Siphinda umzuzu wokuthula kunye nemithandazo. Ngexesha lokuhlanjululwa, ngokomthetho kaMoses, abazali bakaYesu bamsa eYerusalem, ukuba bammise phambi kweNkosi,
Kwimfihlakalo yesihlanu, singqina uMariya edibana noYesu etempileni. Siphinda umzuzu wokuthula kunye nemithandazo. Emva kweentsuku ezintathu bamfumana etempileni, ehleli phakathi kwabafundisi, ebamamele ebabuza. Wathi kubo: "Benindifunela ntoni? Beningazi na ukuba ndimele ndibe sezintweni zikaBawo? ».
Ukuba uyayithanda inqaku lethu, siyakumema ukuba undwendwele iwebhusayithi yethu ukuze ufunde okungakumbi ngolu hlobo, kunye nemithandazo enokukunceda, enje Umthandazo wasekuseni xa uvuka .
Siqala imfihlelo yesibini, ngoLwesibini nangoLwesihlanu, senza uphawu lomnqamlezo kwaye sithandaze:
Kwimfihlelo yokuqala sibona uYesu ehlupheka kwiGetsemane. Sino mzuzwana wokuthula, sithandaza uMthandazo weNkosi, Dumisa uMariya nozuko. UYesu wawa emhlabeni wathandaza. Uthe: «Abba! Unokwenza yonke into; Susa le chalice kum. Kodwa ayisiyiyo le ndiyifunayo, kodwa yile nto uyifunayo ».
Kwimfihlelo yesibini, singqina ukuba uYesu wabethwa kwikholamu. Ke kaloku uPilato, ngokunga angasithomalalisa isihlwele, wabakhululela uBharabhas. wathi ke, emtyakatyile, wamnikela ukuba abethelelwe emnqamlezweni.
Kwimfihlelo yesithathu, singqina uYesu ethweswe isithsaba ngameva. Amajoni ke amambathisa ezimfusa, aza amthi jize ngesithsaba sameva.
Kwimfihlelo yesine singqina ngoYesu, endleleni eya eKalvari, enomnqamlezo emagxeni akhe. Amthwala ke uYesu, awuthwala umnqamlezo.Waphuma waya endaweni ekuthiwa, yeyokhakhayi, ekuthiwa yiGologota ngesiHebhere, apho bambethelela khona.
Kwimfihlelo yesihlanu sibona uYesu esifa emnqamlezweni. UYesu, xa wayethatha iviniga, wathi: "Kugqityiwe." Wathoba intloko, wawunikela umoya wakhe.
Siqala imfihlakalo yesithathu, ngolwesiThathu nangeCawa, senza umqondiso womnqamlezo kwaye sithandaze:
Owu Thixo, okuphela koNyana okuphela kwamzeleyo, nobomi bakhe, ukufa nokuvuka kwakhe, usifanele umvuzo wobomi obungunaphakade; Siyakubongoza ukuba usinike ukuba, xa sicamngca ngezi mfihlakalo zikwiRosari, sixelisa imizekelo eziqulethwe kwaye siphumelele amabhaso abathembisayo. NgoYesu Krestu iNkosi yethu. R. Amen
Kwimfihlelo yokuqala singqina ngovuko oluzukileyo lukaKristu. Sino mzuzwana wokuthula, sithandaza uMthandazo weNkosi, Dumisa uMariya nozuko.
Kwimfihlelo yesibini singqina ukunyukela kukaYesu ezulwini.
Kwimfihlelo yesithathu singqina ukuza koMoya oyiNgcwele ngePentekoste.
Kwimfihlakalo yesine singqina ngokuthathelwa kukaMariya ezulwini nomzimba nomphefumlo.
Kwimfihlelo yesihlanu singqina uMariya ethweswe isithsaba njengoKumkanikazi wezulu nomhlaba.
Ngokufanayo, sikushiya le vidiyo ilandelayo ukuze ugcwalise ulwazi lwale rosari ngendlela efanelekileyo.
IRosari ye-Mystic Rose
IRosari yokumlalisa umntwana uThixo